Fanonganam-panjakana 1991, 2002 ary 2009 : Tsy nianatra nandritra ny 21 volana -
AccueilRaharaham-pirenenaFanonganam-panjakana 1991, 2002 ary 2009 : Tsy nianatra nandritra ny 21 volana
26/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Lasa resa-be mihitsy ity datin’ny 6 Novambra noraisin’ny fitondram-panjakana hiverenan’ny mpianatra an-tsekoly ity. Ho fitsinjovana ireo mpianatra manoloana ny ady amin’ny aretina pesta anefa no anton’izany fanapahan-kevitra izany. Rehefa inona àry no ekentsika sy ankasitrahantsika ny tsy fandefasana ny ankizy any am-pianarana? Rehefa hanongam-panjakana ihany ve?
Mahatsiaro io datin’ny 1991 io avokoa ireo mpianatra tokony hanala fanadinana “baccalauréat” tamin’izany fotoana. Taom-pianarana iray manontolo (12 volana) mihitsy no potika vokatry ny grevy nanonganana ny amiraly Didier Ratsiraka teo amin’ny fitondrana. Voatery nahemotra ny taona 1992 ny fanadinana “baccalauréat” ho an’ny taona 1991. Nanaiky izany fanapahan-kevitra fanaovana sorona ny fianarana sy ny ho avin’ny zaza Malagasy izany avokoa, na ny sekolim-panjakana, ny tsy miankina ary ny sekolim-pinoana rehetra. Maty herintaona be izao ny mpianatra teo amin’ny kilasy famaranana.
Nikatso nandritra ny enim-bolana mahery ny raharaham-pirenena, ary isan’ny lasibatra tamin’izany koa ny sehatry ny Fampianarana. Mbola fanonganam-panjakana ihany koa anefa no anton’izany fampiatoana ny tontolon’ny Fampianarana teto izany, ary amam-bolana maro mihitsy. Niantso ny fampikatsoana ny sehatra rehetra i Marc Ravalomanana sy ny antoko TIM nampian’ireo mpanao politika dinaozoro. Fa nekentsika sy nankasitrahantsika koa izany fanapahan-kevitra nanao sorona ny fianarana sy ny ho avin’ny mpianatra izany, ary nanakatona ny varavarany avokoa ny sekoly rehetra manerana ny Nosy. Nentanina teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey mihitsy ireo mpampianatra mba tsy hanohy ny fampianarana fa hihazo ny fihetsehana an-dalambe.
Mbola resaka fanonganam-panjakana hatrany ny resaka manaraka. Telo volana tsy nianatra ny mpianatra nandritra ny “coup d’Etat” notarihan’i Andry Rajoelina, Hajo Andrianainarivelo, Christine Razanamahasoa, Monja Roindefo, sns. Fa nekentsika sy nankasitrahantsika koa izany fanapahan-kevitra nanao sorona ny fianaran’ny zanaka malagasy izany, ho fanomezan-tanana ny fanonganana ny fitondrana Marc Ravalomanana. Niato avokoa ny Fampianarana nanerana ny Faritany enina, na sekolim-panjakana, na tsy miankina ary nisy tamin’ireo sekolim-pinoana aza nandefa ny mpianatra tao aminy teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey tsotra izao, ary nanaovana fanentanana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey mihitsy ny fampiatoana ny Fampianarana. Izany no zava-nisy teto amin’ity firenena ity, ho an’ireo izay fohy fitadidy.
21 volana be izao raha atontaly ny fotoana tsy nandehanan’ny mpianatra tany an-tsekoly vokatry ny fanonganam-panjakana ny taona 1991 (taom-pianarana iray manontolo, izany hoe 12 volana), 2002 (tsy nianatra nandritra ny enim-bolana) ary 2009 (tsy nisy sekoly nandritra ny telo volana). Natao fitaovana mihitsy ny sehatry ny Fampianarana, ary natao sorona hatrany ny mpianatra. Ankehitriny toa mahavariana ihany ny fihetsiky ny sasany manangam-bozona manoloana ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana nanemotra ny fidiran’ny mpianatra amin’ny faha-6 Novambra 2017, fanapahan-kevitra noraisina ho fitsinjovana indrindra ny fahasalamana sy ny ain’ireo mpianatra manoloana ny aretina pesta. Izay no nametrahana ny fanontaniana tetsy ambony hoe: “vitantsika ve ny manao sorona amam-bolana ny fianaran’ny zanaka malagasy rehefa hanongam-panjakana, fa tsy ekentsika kosa ny fanemorana andro vitsivitsy ny fiverenan’ny mpianatra any an-tsekoly, ho fitsinjovana ny ainy sy ny fahasalamany?”.
Mbola ankamantatra hatramin’ny androany na ho tanteraka na tsia ireo fanadinam-panjakana toa ny CEPE, BEPC, BACC amin’ity taom-pianarana 2016- 2017 ity. Lasa lavitra mantsy ny fitakian’ireo mpampianatra mivondrona anaty sendika, ary miha miitatra hatrany ny ...Tohiny